कस्तो छ बीआईटी कोर्ष, अनि कहाँ पढ्ने ? « Tech News Nepal
कस्तो छ बीआईटी कोर्ष, अनि कहाँ पढ्ने ?
काठमाडौं । अहिले धेरै मानिस आईटी क्षेत्रमा आफ्नो करियर बनाउन चाहन्छन् । तर आईटीभित्र पनि धेरै क्षेत्र र विषय छन् । कुन विषय पढ्ने, कता पढ्ने र कहाँ जाने भन्ने दुविधा सबै विद्यार्थीलाई हुन्छ ।
तपाईंका लागि कुन विषय पढ्दा उपयुक्त हुन्छ, तपाईंले पढ्न चाहेको विषय के हो, कहाँ पढ्ने, कति समय र खर्च लाग्छ, यी सबै कुरा हामीले हाम्रा लेखमार्फत जानकारी दिइरहेका छौं ।
आज हामी तपाईंलाई बीआईटी अर्थात् ब्याचलर इन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी विषयका बारेमा बताउने छौं । आईटी क्षेत्रमा करियर बनाउन चाहनेका लागि बीआईटी एकदमै राम्रो विषय हो ।
आईटीका धेरैजसाे काेर्ष तथा आईटी इन्जिनियरिङ पढ्न चाहने विद्यार्थीले उच्च माध्यमिक तहमा विज्ञान विषय लिएको हुनुपर्छ ।
तर बीआईटी एउटा यस्तो एड्भान्स आईटी कोर्ष हो, जुन पढ्न तपाईंंलाई साइन्सको एकेडेमिक ब्याकग्राउण्ड अनिवार्य पर्दैन । उच्च माध्यमिक तहमा व्यवस्थापन अर्थात् सय-सय पूणाङ्कको अंग्रेजी र गणित विषय लिएर ती दुवै विषयमा ‘सी’ ग्रेडसम्म ल्याउने विद्यार्थीले पनि बीआईटी पढ्न पाउँछन् ।
अहिले बीआईटी नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र पूर्वाञ्चाल विश्वविद्यालयमा मात्र अध्ययन अध्यापन हुन्छ ।
यसमध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका ६ वटा आङ्गिक तथा निजी कलेजहरु पाटन मल्टिपल कलेज ललितपुर, महेन्द्र मोरङ आदर्श मल्टिपल क्याम्पस मोरङ, विरेन्द्र मल्टिपल क्याम्पस चितवन, महेन्द्र मल्टिपल क्याम्पस बाँके र सिद्धनाथ साइन्स क्याम्पस कञ्चनपुरमा यो शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।
यस्तै पूर्वाञ्चल विश्वविद्याल अन्तर्गत नेपालका ७ वटा कलेजमा यो विषय अध्ययन अध्यापन हुन्छ ।
जसमध्ये पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेक्नोलोजी मोरङ, हिमालयन इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी काठमाडौं, हिमालयन ह्वाइट हाउस इन्टरनेश्नल कलेज ललितपुर, कलेज अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एण्ड इन्जिनियरिङ (सीआईटीई) काठमाडौं, आर्यन स्कुल अफ इन्जिनियरिङ काठमाडौं, किष्ट कलेज अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी काठमाडौ र कान्तिपुर सिटी कलेजमा यो विषय अध्ययन अध्यापन भइरहेको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गत वर्ष (२०७६) देखि बीआईटी कार्यक्रम सुरु गरेको हो । त्रिविले पहिलोपटक पाटन क्याम्पसमा यो कार्यक्रम सुरू गरेको थियो । त्रिविले सम्बन्धन दिएका देशभरका कलेजमा बीआईटी प्रोग्रामका लागि न्यूनतम ३६ जनाको कोटा निर्धारण गरेको छ ।
बीआईटी अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीले इन्सिच्युट अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी (आईओएसटी) त्रिविको परीक्षा उत्तीर्ण गरी नाम निकाल्नु पर्नेछ ।
४ वर्ष अर्थात् ८ सेमेस्टरको यस कोर्षलाई पाटन क्याम्पसले तीन लाख ७५ हजार रुपैयाँमै पढाइरहरेको छ ।
त्रिविले न्यूनतम ३६ जनाको कोटा निर्धारण गरेपनि साे क्याम्पसमा पर्याप्त पूर्वाधार र विद्यार्थीको मागका कारणले अहिले यो कोटालाई बढाएर १०८ पुर्‍याई तीन समूहमा अध्ययन अध्यापन भइरहेको छ ।
त्रिविको पाठ्यक्रम अनुसार बीआईटीमा सूचना प्रविधि बाहेकका अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्रजस्ता कोर्ष पनि समेटिएको छ । प्रत्येक सेमेस्टरको क्रेडिट आवर १५ घण्टा रहेको छ । अन्तिम सेमेस्टरमा विद्यार्थीका लागि इन्टर्नशिपको व्यवस्था पनि गरिएको छ भने ८ सेमेस्टरमा केही इलेक्टिभ कोर्ष पनि समावेश गरिएका छन् ।
पूर्वाञ्चल विश्ववविद्यालयले नेपालमा पहिलोपटक सन् २००१ मा बीआईटी कार्यक्रम ल्याएकाे हाे । त्रिविको तुलनामा पूर्वाञ्जल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा बीआईटी कोर्ष धेरै एड्भान्स भएको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक गोपाल शर्मा बताउँछन् ।
यस विश्वविद्यालय अन्तर्गत हाल ७ वटा आङ्गिक तथा निजी कलेजमा बीआईटी अध्ययन तथा अध्यापन भइरहेको छ ।
पूर्वाञ्जल विश्वविद्यालयमा पनि बीआईटी चार वर्षको ८ सेमेस्टरको रहेको छ । १०+२ तहमा जुनसुकै संकाय (विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी, शिक्षा) पढेका विद्यार्थीले १०० अंकको गणितको विषय पढेको हुनुपर्छ । साथै सबै विषयमा कम्तीमा सी ग्रेड सहित सीजीपीए २.० कटाएको हुनुपर्छ ।
यस कोर्षले मुख्य रुपमा प्रोग्रामिंग सीप बिकाशमा महत्वपुर्ण भुमिका खेल्छ र साथसाथै कम्प्युटर प्रणाली डिजाइन, कम्प्युटर आर्किटेक्चर र संचारको बारेमा समेत ज्ञान प्रदान गर्छ। अध्ययनको क्रममा विद्यार्थीले इन्टरनेट तथा वेब, मल्टिमिडिया, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, मोबाइल टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा समेत सीप विकसित गर्न सक्दछन् ।
बीआईटी पढेका विद्यार्थीले सफ्टवेयर तथा वेब डेभेलोपर, मोबाइल एप डेभलपर, सफ्टवेयर इन्जिनियर, सूचना प्रविधि विशेषज्ञ, सूचना प्रविधि परामर्शदाता, क्लाउड आर्किटेक्ट, डेटा इन्जिनियर, डाटावेस प्रशासक लगायत क्षेत्रमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्छन ।
त्रिविको भन्दा कोर्षमा के फरक छ ?
प्रत्येक सेमेस्टरमा विद्यार्थीले गर्नुपर्ने प्रोजेक्ट र इन्टर्नशिपको माध्यमबाट बजारमा प्रभावकारी सहभागिताका लागि क्षमता र आन्तरिक कौशल विकास गर्न समेत बीआईटी कार्यक्रमले सहयोग गर्छ ।
काठमाडौं । सूचना प्रविधिसम्बन्धी विभिन्न सात विषयमा निःशुल्क अनलाइन तालिम हुने भएको छ । राष्ट्रिय